Kitra eran-tany : lany ho filohan’ny Fifa i Gianni Infantino | NewsMada
Kitra eran-tany : lany ho filohan’ny Fifa i Gianni Infantino
Par Taratra sur 27/02/2016
Hitantana ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa) mandritra ny efa-taona, ilay teratany soisa, Gianni Infantino. Tamin’ny isam-bato 85 isan-jato ny nahalany azy.
Efa teo amin’ny fihodinana faharoa ny lehilahy vao nivoaka ho mpandresy tamin’ity. Tsy nisy nahazo ny antsasa-manilan’ny vato mantsy ireo kandidà efatra nifaninana, dia Gianni Infantino, nahazo vato 88, narahin’i Salman Bin Ebrahim, vato 85. Fahatelo, ny Printsy Ali, vato 27 ary tsy nisy afa-tsy 7 monja ny an’ilay Frantsay, Jerome Champagne.
Niala an-daharana, tamin’ny ora farany kosa ilay Afrikanina tatsimo, Tokyo Sexwalle.
Voatery niditra teo amin’ny fihodinana faharoa, ireo kandidà efatra mirahalahy mianaka. Rehefa natao ny latsa-bato, mbola nitarika ary nahazo vato 115 i Gianni Infantino. Nahazo ny antsasa-manila izy ka voafidy ho filohan’ny Fifa. 88 kosa ny an’i Salman Bin Ebrahim. 4 ny an’ny Printsy Ali ary tsy nitoko i Champagne.
Gianni Infantino izany no handimby an’i Sepp Blatter, nitondra izany nandritra ny 17 taona.
Omaly tany Zurich, Soisa, nanatontosana, ny fivoriamben’ny Fifa sady nanaovana ny fifidianana. Io ihany koa ny nanaovana fanitsiana ny sata mifehy ny Fifa, izay nolanian’ny mpikambana miisa 179 raha 22 nitsipaka. Afaka enim-bolana, aorian’ny fivoriambe, vao ampiharina izany sata nasiana fanitsiana izany.